XAAMILADA LO'DA: SIDA LOO OGAADO HADDII UU DABOOLAY IYO HADDII KALE, WAXA LA SAMEEYO HADDII AAN LA DABOOLIN - XOOLAHA
Horumarka uurjiifka ee uur-jiifka ah ee ilma-galeenka ee lo'da ayaa dhacaya 285 maalmood gudahood ka dib marka la isku miiro. Daraasad qaali ah ayaa la qaadaa ugu badnaan maalinta lixaad ee dhalmada ka dib, mudo dheer oo adeeg ah ayaa keenaysa wax-qabad iyo hambalyo.
Sida ugu dhakhsaha badan ee lo'da ku yimaadaan xaalad ah ugaarsiga, iyada ayaa loo gooyaa. Haddii hannaankani uu ku dhaco xilliga taranka, bacrinta ayaa dhacda. Aragga si qaas ah u go'aamiya uurka haweenku wuxuu noqon karaa qiyaastii bisha shanaad ee jadwalka. Maqaalkani wuxuu ka wada hadli doonaa siyaabaha lagu ogaanayo uurka xilliga ugu horreeya, sababaha uumar la'aanta iyo ka hortagga dhibaatooyinka.
Noocyada koorsada uurka
Taariikhaha uurka ee lo'da ayaa ku habboon haweenka. Waqtiga celceliska waa sagaal bilood, halka ay jirto is-bedel muddo hal ilaa laba toddobaad ah, taas oo ku xiran xaaladaha xabsiyada iyo xaalada jireed ee xayawaanka. Dhaqdhaqaaqa jinsiga ee dheddigga dhalinyarada ah ayaa ka muuqda da'da lix bilood, laakiin bislaanshaha jirka ee jiirka ayaa gaaraya 1.5-2 sano. Xaamiladu waxay ka bilaabataa maalinta bacriminta ee xayawaanka waxayna ka kooban tahay bacriminta, uur-qaadashada, bilowga iyo xilliga qallalan. Uurku waa uur qaadidda ilmaha caloosha, furitaanka - muddo ah taas oo abuurka caanaha ee candho xoolo si tartiib tartiib ah hoos u dhaco. Mudada qalalan - marxaladda ay socoto laba bilood ka hor dhalmada, inta lagu jiro caleenta ma siinayso caano, maaddaama dhammaan nafaqooyinka ay u tagaan uur-jiifka. Xayawaanka si gaar ah loo soo saaro si ay u galaan qoryaha dhintay waa in lagu qasbo, yaraynta socodka biyaha iyo quudinta suuban.
Waa muhiim! Inta lagu jiro bacda ugu horeysa, miisaanka qaansiirta dhalinyarada waa inuu ahaadaa ugu yaraan 280 kg (60% miisaanka celceliska qofka weyn). Foomkan jireed wuxuu u fiicanyahay inuu fuliyo bakhtiinta. Dumarka ciriiriga ah iyo kuwa yaryar ma awoodi doonaan inay sameeyaan caruur caafimaad qaba.
Caanaha laysku ma oggola inay dhalaan sababtoo ah cillado keena ama cillado ku dhasha habka taranka, cudurada faafa ee hore, farsamooyinka abuurista cillad aan habbooneyn iyo dhaawacyada maskaxda. Dumarka waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin dhalinyaro, kuwaas oo u yimid ugaadhsiga muddo seddex bilood ah ka dib dhalmada, laakiin aan la bacrin karin ka dib markii dhadhan.
Sida loo ogaado haddii lo'da la daboolay ama aaney jirin
Qeybta labaad ee uurka, uurjiifku wuxuu ku koraa si ku filan si uu u baddalo wareegyada dibedda ee gudaha. Si loo ogaado uur-qabashada wakhti hore, waa inaad ku fekertaa hababka caanka ama shaybaarka.
Sida ugu saxsan ee lagu ogaan karo bacrinta waa maqnaanshaha estrus wakhtiga loogu talagalay. Haddii haweenku ay noqoto mid degan, taxadar leh iyo sifudud, macnaheedu waa in uurku bilaabay. Digaagga bacriminta ah kama jawaabto dibiiga, wuxuu u dhaqmaa si aamusnaan leh wuxuuna leeyahay cunto wanaagsan. Calaamadaha kale ee uurku waa dheecaan cad oo muuqda oo ka muuqda xubinta taranka. Dumarka waa la soo koobay, jaakadkuna waxay noqotaa mid dhalaalaya, jilicsan oo siman.
Ma taqaanaa? Caanaha waxsoosaarka caanaha ayaa la saadaalin karaa iyada oo ku saleysan waxsoosaarka hooyada iyo aabaha. Tilmaamahan hooyada waxaa lagu xisaabiyaa dhalashadiisa caanaha sanadlaha ah, digaagana waxaa lagu aqoonsan karaa wadarta guud ee caanaha gabdhaha. Lo'da qaasatan qiyaas ahaan 3-4 sano ee nuujinta waxay bixisaa in ka badan 200 kun oo koobi oo caano ah, iyo lo'da 60 ka mid ah lo'da tayada sare leh waxay soo saari kartaa wax ka badan tone caano ah maalintiiba!
Inta lagu jiro saddexda bilood ee ugu horreeya ka dib dhalmada, heerka hoormoonada ee lo'da waxba isma bedelin. Isbedelada waxay bilaabmayaan afraad ilaa shanaad toddobaad kadib marka la isku miiro, iyo tan wakhtigan waad samayn kartaa tijaabooyinka shaybaarada hormoonnada. Ultrasound waa hab kale oo lagu ogaado uur. Ultrasound ayaa go'aamin doonta heerka koritaanka uurjiifka iyo joogitaanka isbeddelka horumarkiisa.
Waa muhiim! Baaritaanka Ultrasound ee uur-jiifka ayaa la muujiyey tan iyo toddobaadkii lixaad ee uurka, tan iyo muddadii hore waxay si xun u saamayn doontaa ilmaha caloosha ilaa inta uu kicinayo ilmo-dhicis.
Baaritaanka malawadka waa dareenka ilmo-galeenka iyo geesaheeda iyada oo loo marayo derbiyada malawadka. Dhakhtarka xoolaha wuxuu ku dhejiyaa gacmo dhaadheer leh gacmo dheer, ka dib markii uu hubiyo in uusan xirtin fareebkiisa faraha. Iyadoo loo marayo xayawaanka xayawaanka ah, waxay si haboon u galisaa gacanta malawadka iyo xajmiga salka hoose ee wadnaha ee afka ilmagaleenka. Dumarka la bacrimiyey, ilmo-galeenka ayaan la dabooli karin hal gacan, geesaha ilma-galeenku wuxuu ku kala duwanaan doonaa cabbirka. Geeska oo uu miro la sameeyay ayaa ka jawaabi doona qalqalaha adigoo taabanaya, sidaa darteed, waa in la dareemaa wakhti gaaban oo taxadar leh. Baaritaanka dibadda ee xayawaanku wuxuu noqonayaa mid wax ku ool ah. Laga bilaabo bisha shanaad, xajinta caloosha caloosha ayaa muujin doonta xaaladda guud ee ilmaha caloosha ku jira, oo ay ku jirto goobta iyo baaxada, iyo dhageysiga ayaa siin doona fursad lagu cabbiro qalliinka wadnaha.
Ma taqaanaa? Dareenka urka ee lo'da waa mid aad u liidata - ka xun tan riyaha, fardaha iyo idaha. Si kastaba ha ahaatee, waxay si fudud u go'aamisaa tayada quudinta iyo ma daalin doono meesha bacrimin dhowaan la isticmaalay. Muuqaal ahaan, sida magdhow, lo'da waxaa la siiyay awooda cajiib ah ee lagu dareemo dhulka magnetic Earth. Haddii aad siiso fursad ay ku degto habeenkii iyada oo u gaar ah, waxay hubaal tahay inay noqoto meyd ah dhinacyada moobiilka.
Go'aaminta uurka ee habka dadweynaha
Marka lagu daro baaritaanka dibadda ee xubnaha taranka iyo falanqaynta dhaqanka xayawaanka, baaritaanka uurka waxaa loo samayn karaa caanaha. Waxaa lagama maarmaan ah in la galiyo dhalada biyo heerkulka qolka isla markaana si tartiib ah u daadi dhawr dhibcood oo caano ah oo dulsaar ah biyaha. Haddii ay ku faafto biyaha leh foorno khafiif ah oo rinji cad, bacrintu ma dhicin. Caanaha haweenka uurka leh ayaa hoos u dhigi doona gunta hoose ee muraayadda, kaliya waxay ku faafaan waxoogaa biyo ah. Hab kale oo lagu baaro waxay la xiriirtaa kororka heerka hormoonka hormoonka hormoonka caanaha lo'da inta lagu jiro uurka. Caanaha lo'da ee lo'da marka la isku qasan yahay aalkolada daawada 1: 1 saamiga ayaa si dhaqso badan u dhaqdhaqaajin doona caanaha lagu cuno.
Waa maxay sababta lo'da aan loo daboolin
Beeralayda oo laba qof oo jinsi ah oo jinsi ah oo jinsi kala duwan ku nool yihiin, bacrintu waxay u dhacdaa si dabiici ah, iyo su'aasha ah in la daboolo lo'da aysan soo bixin. Taas bedelkeeda, beeraha beeraha waxaa jira xaalado badan oo ah lo'da lo'da, iyo sababaha tani waa ay ka duwan yihiin.
Waa muhiim! Nidaamka dabeecada wuxuu sawir sax ah ka bixinayaa bilowga uurka, laakiin waxaa keliya oo lagu samayn karaa jadeeco khibrad leh. Xayawaan aan fiicnayn iyo mid qaawan oo xayawaan ah ayaa sababi kara dhicin.
Bulls ayaa sida caadiga ah loo doortaa si taxadar leh, laakiin waxaa jira kiisas oo tayada sheyga sheybaarku uu sii xumaanayo xaaladaha xabsiyada oo aan ku filnayn. Shahwo laysku haleyn karo ma abuuri karo ukun, iyo uurka ma dhicin in lo'da. First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo caafimaadka buluugga - si loo caddeeyo haddii uu leeyahay dhaawacyo xubnaha taranka ama cudurada faafa. Dumarka aan habooneyn, oo haweenku diidaan in ay xakameeyaan, sidoo kale ma keenaan bacrinta. Baxnaanshaha dabiiciga ah wuxuu noqon karaa xalka dhibaatada boorka. Daawooyinka shahwada tayada-sare leh waxay hubiyaan in carruurtu ay caafimaad qabaan iyo geedi-socodka hawsha adoo aan lahayn walaac aan fiicnayn.
Dhibaatooyinka xagga maskaxda
Diyaargarowga haweeneyda loogu talagalay dhaaminta waa fure u ah bacriminta guuleysiga. Haddii haweeneydu ay xishood tahay, dhallinyaradu waxay si xun ugu jawaabtaa dibi, waxay u fiicantahay inaad u beddesho qaab dabiici ah. Dhibaatooyinka maskaxda ee khaaska ah waxay ku dhacaan dumarka kuwaas oo lahaa khibrad aan fiicnayn oo ah dabiiciyan dabiiciga ah.
Ma taqaanaa? Dadka lo'da ee Maraykanka waxaa lagu qiyaasay boqolaal malyan oo madax ah. Haddii aad soo ururisid dhamaan cayayaanka in xayawaankaasi ay soo saaraan sanad, oo ka soo saara methane biogas, ka dibna tamarta korontada ee laga helo shaqadooda waxay soo saari doontaa in ka badan boqol bilyan oo kilooatt saacadood ah. Miisaankani wuxuu ku filnaan doonaa inuu si joogto ah u keeno koronto in ka badan hal milyan oo dhismo ah oo dhowr dabaq ah.
Jawaab-celinta jinsiga ee xad-dhaafka ah waa dabeecadda dhallinyarada iyo lo'da, kuwaas oo leh xanuunka hormoonada. Nymphomania ee lo'da waxay la kicisaa xoogaa sii kordheysa. Marka hore, marxaladda estrus waa la kordhiyaa mar kasta, markaa muddada ugaarsashada ayaa kordha, xaaladaha la dayacayna xayawaanku si joogta ah ayuu ugu jiraa. Si kastaba ha ahaatee, hannaankani lama socdo ovulation, sidaa darteed bacriminta waa wax aan macquul ahayn. Xayawaanka ayaa lumiya miisaanka iyo wax soo saarka, waxay noqotaa dareen, qallafsan iyo buuq badan.
Nidaamyada firfircoon ee xubnaha taranka - mid kale oo ka mid ah sababaha uurku aanu dhicin. Cudurrada faafa waxaa kaliya oo lagu aqoonsan karaa oo laga tirtiri karaa dhakhtar xoolaad leh, maaddaama ay inta badan ku sii socdaan foomka qarsoon. Cudurada infekshanka badanaa si qalad ah waxaa ka mid ah jiritaanka luteum corpus on ugxan.
Ogow sababta ilmo dhicisku u dhaco lo'da iyo sida loo si habboon u cuno lo'da qalalan.
Waa qanjir ku meel gaar ah oo qarsoodi ah progesterone, joojinta horumarka ukunta cusub. Qaar ka mid ah lo'da, ma baabi'i karo ka dib dhalmada iyo sii wadata in la joojiyo hawlaha galmada. Lutumka jirka waxaa lagu tirtiraa hal cirbad oo prostaglandin ama gacanta lagu jajabiyey.
Waa muhiim! Joogitaanka cudurrada faafa waxaa lagu tilmaamaa in laga soo saaro nooc ka mid ah xubnaha taranka, isbeddelka tayada caanaha, joogitaanka dhadhanka ama dhadhanka cusbada. Si loo go'aamiyo wakiilka keena cudurka, waa lagama maarmaan in la sameeyo baaritaano taxane ah.
Baaritaannada caadiga ah ee caafimaadka xoolaha iyo xaaladaha guriyeynta wanaagsan waxay gacan ka geysan doonaan ilaalinta caafimaadka iyo wax soo saarka xoolaha. U hoggaansanaanta hurdada, nafaqada iyo nasashada waxay siinaysaa lo'da dhammaan walxaha lagama maarmaanka ah waxayna abuuri doonaan jawi nafsi ah oo raaxo leh. Kaliya xayawaanka dareemaya fiicnuu ku guuleysan karaa uur qaadidda iyo qaadashada kubir caafimaad leh. Milkiilaha daryeel leh ayaa markasta fiiriya dabeecada xoolihiisa iyo ogeysiisyada xita xitaa wax aan ka yareynin caadada waqtigeeda. Booqashada ku xigta ee dhakhtarka xoolaha ayaa talo ka geysan karta in la go'aamiyo sababta uur-qabida ee lo'da, ka tirtir, iyo bacriminta haweenka ujeedada kororka xiga ee lo'da.
Video: uur ama aan uur lahayn